Firefox 90 inosvika ichibvisa rutsigiro rweFTP nekuvandudza kwekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki matanhatu apfuura, Mozilla Iye akatanga iyo v89 yewebhusaiti yako ine makeover iyo vazhinji vakafarira uye vakaodza moyo vamwe. Nhasi, kunyangwe iri muLinux blogosphere yakaziviswa nezuro, iyo kambani inozivikanwa nekuvandudza iyo gava browser yakatanga Firefox 90, yakanyanya kushomeka kuendesa. Kuburitswa zviri pamutemo, pamwe nerondedzero yenhau dzakatoburitswa, kwakaitika maminetsi mashoma apfuura, asi anga achiwanikwa pane server yeMozilla kubva nezuro masikati uye sekuvandudzwa pane chiteshi cheBeta kubvira kupera kwevhiki.
Pakati penyaya dzinosanganisira Firefox 90 inosanganisira, pamwe chimwe chinhu chinomira pachena icho vabvisa, sekutsigira kweFTP. Vakazviitira kusimudzira kuchengetedzeka, uye muchinhu ichi ivo vakawedzera zvimwe zvekuvandudza. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akasvika neFirefox 90, kunyangwe isu tichifambira mberi kuti kuvhurwa kwacho hakufadze sezvaitarisirwa nemunhu mushure mekushandurwa kwegumi mukuverenga.
Chii chitsva muFirefox 90
PaWindows, zvigadziriso zvino zvinogona kuiswa kumashure nepo Firefox isiri kushanda.
Firefox yeWindows ikozvino inopa peji idzva nezve: chechitatu-bato kubatsira kuziva zvinoenderana nenyaya zvinokonzerwa nevechitatu-bato kunyorera.
Kunze kweiyo HTTPS-Chete nzira inogona kubatwa mukati nezve: zvaunofarira # kuvanzika.
Kudhindira kuPDF ikozvino kunogadzira ma hyperlink anoshanda.
Shanduro yechipiri yeFirefox's SmartBlock ficha inowedzera inovandudza kuvanzika kwega Chechitatu-bato Facebook zvinyorwa zvakadzivirirwa kuti zvidzivise kubva pakutiteedzera, asi izvozvi zvangoiswa otomatiki "panguva chaiyo" kana tikasarudza "Kupinda neFacebook" pane chero webhusaiti.
Iyo yemukati menyu chinhu "Vhura mufananidzo mune nyowani tebhu" izvozvi nekukasira kunovhura mifananidzo uye midhiya mune yekumashure tebhu.
Vazhinji vashandisi vasina Hardware yakakurumidza WebRender ikozvino voshandisa software WebRender.
Yakagadziriswa WebRender kuita nesoftware.
Tsigiro yeFTP yabviswa
Firefox 90 yakatangwa zviri pamutemo, kuitira kuti vashandisi veese masisitimu akatsigirwa vagone kurodhaunira kubva ku website yepamutemo. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kukopa iwo-ekuzvivandudza-mabhaari, uye gare gare ivo vanozo gadziridzawo mavhezheni eFlathub, Snapcraft uye epamutemo marekodhi eakasiyana ekuparadzira kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 90 inosvika ichibvisa rutsigiro rweFTP uye kumwe kuvandudza kwekuchengetedza uye WebRender
firefox uye yakashinga kwandiri ndiwo mabhurawuza akanakisa